May 3, 2021 - Cele Fans
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on တပ်မတော်လေမှ ထွက်ခွာသည့်အရာရှိစစ်သည် ၈၀ ခန့် ရှိ
မြန်မာတပ်မတော်လေရဲ့ တပ်ဌာနချုပ်တွေက အရာရှိစစ်သည် ၈၀ လောက်ဟာ တပ်က နေထွက်ပြီးနောက်မှာ အဆက်အသွယ်မရ ဖြစ်နေတယ်လို့ တပ်မတော်လေနဲ့နီးစပ်သူက ပြောပါတယ်။ အခုတပ်မတော်လေက ထွက်သွားတဲ့ အရာရှိစစ်သည်တွေဟာ မန္တလေး တံတပ်ဦး၊ နမ့်ဆန်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ပုသိမ်၊ မင်္ဂလာဒုံနဲ့ တောင်ငူလေတပ်တွေက တပ်မတော်သားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ လေတပ်ဌာနချုပ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ နေစဉ် ည ၈ နာရီမှာ တန်းစီရကာ အဲဒီအချိန်မှာ မတွေ့ဘဲ […]
ညီမ အမလို ATM ပိုက်ဆံထုတ်ရင်း ဝိုင်းရိုက်ခံရတာမျိုးနောက် တခြားသူတွေလဲ မကြုံရအောင် တင်ပေးခြင်းပါ😓
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ညီမ အမလို ATM ပိုက်ဆံထုတ်ရင်း ဝိုင်းရိုက်ခံရတာမျိုးနောက် တခြားသူတွေလဲ မကြုံရအောင် တင်ပေးခြင်းပါ😓
ညီမအစ်မ ဒီနေ့ စမ်းချောင်း ရွှေလောင်းcb backပိုက်ဆံသွားထုတ်တာ ၉ခွဲကနေ ၁၂ထိကို အဲ့တနေရာကနေကို မရွေ့ပါဘူး ….အရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ တမိသားစုလုံး လာထုတ်ကြပြီး ထုတ်ပီးရင် အနောက်ကနေတန်းမစီပဲ သူတို့မိသားစုနားမှာတင် ပြန်နေပြီးထပ်ထပ်ထုတ်နေကြရော ညီမ အမကနေပြီး အနောက်ကလူတွေကိုလဲအားနာပါအုံးဆိုပီးပြောတာကို မကျေနပ်ရင်နင်တို့တမိသားစုလူံး ခေါ်လာခဲ့ဆိုပီး အော်ပါလေရော လူအများက ရဲနဲ့မတွေ့ချင်လို့ရှောင်ချင်လို့ပြသနာမဖစ်တာကိုအခွင့်ရေးယူပြီး တလှည့်စီပတ်ထုတ် နေကြတာပါ ၁၂ခွဲကြတော့ ညီမ အမကနေပြီး အနောက်ကိုလဲကြည့်ပါအုံးဆိုပီး ထပ်လှမ်းပြောတာကို တမိသားစုလုံး သားနှစ်ယောက်ရောအဲ့နားက ကွမ်းယာဆိုင်က သူတို့အမျိုးတွေကပါ […]
ဖုန်းပြောရင်း ကြားဖြတ်အသံသွင်းယူနေတာ ကြုံနေကြရတယ်ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်….
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ဖုန်းပြောရင်း ကြားဖြတ်အသံသွင်းယူနေတာ ကြုံနေကြရတယ်ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်….
ဖုန်းပြောရင်း ကြားဖြတ်အသံသွင်းယူနေတာ ကြုံနေကြရတယ်ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်…. ညကဖုန်းပြောရင်း အသံသွင်းယူ နေတယ် ဆိုပြီး ခြားဖျက် ပြောတာကြုံရလို့ အခုလို တင်ပေးလိုက်ရတာပါနော် …။ ဖုန်းတွေ ခိုးနားထောင်ခြင်းရှိမရှိ သိချင်ရင် *#62#နဲ့စစ်လို့ အခြားနံပါတ်ပေါ်နေရင် ကိုယ့်ဖုန်းကိုခွင့်ပြုချက် မရပဲ နားထောင်နေတာပါ …။ ပုံ (1)မှာပြထားသလို +95 နဲ့ စတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်နေရင် *#21# နဲ့ ပိတ်လိုက်ပါ။ ခိုးနားထောင်နေတာ မို့လို့ပါပဲ …။ ပုံ(2)မှာပြထားသလို not […]
ဘယ်သူကများ လယ်သမားကြီးမေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို ဘဏ်ကို မေးဖူးကြသလဲ
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ဘယ်သူကများ လယ်သမားကြီးမေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို ဘဏ်ကို မေးဖူးကြသလဲ
မေးခဲ့ဖို့သင့်တာ… တနေ့မှာ လယ်သမားအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ ဘဏ်ကို ငွေချေးဖို့ ရောက်လာပါတယ်။ ဘဏ်အရာရှိက သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ – “ဦးလေးက ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ချေးချင်လို့လဲ။” – “တစ်သိန်းပါ” ဘဏ်အရာရှိဟာ ငွေချေးတဲ့ ပုံစံကို သူ့ကို ထုတ်ပေးရင်း ခုလို မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ – “အဲဒီငွေက ဘာအတွက် သုံးမှာလဲ” – “မြို့က ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပြီး ရွာမှာ အမြတ်နဲ့ ပြန်ရောင်းဖို့ပါ” – […]
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကို ကေအိုင်အေပစ်ချနိုင်ခဲ့
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲက ကုန်းလောရွာအနီး၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက် မနက်ပိုင်းတွင် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကို ကေအိုင်အေပစ်ချနိုင်ခဲ့ဟု ယင်းဒေသရှိ ဒေသခံများနှင့် အခြေစိုက်သတင်းမျး၏ ဖော်ပြချက်များအရ သိရသည်။ အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုနေရဆဲပါ။ —————- ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ကုန္းေလာ႐ြာအနီး၌ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းကို ေကအိုင္ေအပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ဟု ယင္းေဒသရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အေျခစိုက္သတင္းမ်း၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ […]
ငလျင်ကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ဒီလိုအချက်ပြပါတယ်
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ငလျင်ကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ဒီလိုအချက်ပြပါတယ်
ငလျင်နှင့်ပတ်သက်၍တိရိစ္ဆာန်တို့၏အမူအကျင့်ကိုလေ့လာခြင်း တိရိစ္ဆာန်တို့၏ထူးခြားသော အမူအကျင့်များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်နိုင်မှုရှိမရှိမိမိတို့၏ဒေသတွင် လေ့လာနိုင်သည်။ ၁။ကျီး နှင့်အခြားသောမျိုးစိတ်ကွဲဌက်တို့၏ တနေရာမှတနေရာသို့အကောင်ရေများပြားပြီး ပြာယာခတ်စွာရုတ်ချည်းပျံသန်းပြောင်းရွှေ့ွှနေစဉ်ကျယ်လောင်စွာ အော်မြည်နေကြခြင်း… ၂။ဖား ကဲ့သို့သောသတ္တဝါများ အချိန်အခါမဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရှိရခြင်းနှင့် တွေ့ရှိစဉ်တွင် ဆူညံစွာအော်မြည်နေကြခြင်း… ၃။မြင်းကဲ့သို့သော သတ္တဝါများ ဆူပူရုန်းကန်ကြခြင်း၊အုပ်စုလိုက်ထွက်ပြေးကြခြင်း၊ကျယ်လောင်စွာ တကောင်ပြီးတကောင် ဟီ ကြခြင်း ၄။သိုးဆိတ်ကဲ့သို့ သတ္တဝါများအုပ်စုအတွင်းအတင်းတိုးဝင်၍ အော်မြည်နေကြခြင်း ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေကြခြင်း ၅။ဘဲငန်းကဲ့သို့သတ္တဝါများ တကောင်ခြင်းဖြစ်စေ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေအတောင်ပံအားမြှောက်၍ ဆောက်တည်ရာမရ အော်မြည်ထွက်ပြေးနေခြင်း ၆။ကြွက်ကဲ့သို့သော သတ္တဝါများ အုပ်စုလိုက် အော်သံပေး၍တောင်မြောက်ဆောက်တည်ရာမရအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးနေခြင်း ၇။မျောက်ကဲ့သို့သော […]
လမ်း​ဘေးမှာ ​တောင်းရမ်း​နေတဲ့​ကောင်​လေးကို လုပ်ငန်းအရင်းနှီး​ထောင်​ပေးတဲ့ ​စေတနာရှင်
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on လမ်း​ဘေးမှာ ​တောင်းရမ်း​နေတဲ့​ကောင်​လေးကို လုပ်ငန်းအရင်းနှီး​ထောင်​ပေးတဲ့ ​စေတနာရှင်
ယခုဖော်ပြထားတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ အခုလိုရေးသားထားတာက …”ဒီကလေးလေးကို စသိတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ လပိုင်းလောက်ကပါ။ ကားနှစ်စင်းကြားထဲ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးလေး တောင်းနေတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ ၊ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင်လည်း အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိမှာစိုးတာနဲ့ အနီးမှာရှိတဲ့ ကန်စွန်းဥပြုပ်လေး ဝယ်ပေးခဲ့လိုက်တယ်။.. လူသံကြားမှ ကားကြားထဲက ရုတ်တရက် ထွက်လာရင် လူတွေ လန့်မှာစိုးလို့ အရှေ့လေးနည်းနည်းထွက်ပြီး တောင်းဖို့နည်းပါ သင်ပေးခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ ။နောက် ပိုင်း ကိုယ်လည်း မေ့ မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ပြီး၊.. မတ်လလယ်လောက်မှာ […]
ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ လမ်းရွေးချယ်ခဲ့ တာမို့ အဆုံးထိလျောက်မယ့် အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်မေဦး
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ လမ်းရွေးချယ်ခဲ့ တာမို့ အဆုံးထိလျောက်မယ့် အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်မေဦး
Makeup Artist မေဦးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ သတ္တိရှိမှုတွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို လေးစားအားကျနေကြရတာပါ။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေကိုတော့ မေဦးရဲ့ လူမှုကွန်ယက် များတွင် ဝေမျှပေးနေတာပါ။ မေဦးကတော့ လတ်တလောမှာ ၅ဝ၅ ပုဒ်မနဲ့ […]
သခင့် ဓာတ်ပုံဘေးနား မှာ အမြဲစောင့်နေရှာ တဲ့ သနားစ ရာခွေးလေရဲ့အဖြစ်
May 3, 2021 Cele Fans Comments Off on သခင့် ဓာတ်ပုံဘေးနား မှာ အမြဲစောင့်နေရှာ တဲ့ သနားစ ရာခွေးလေရဲ့အဖြစ်
ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆရာဦးသက်နိုင်ဦး၏ ဖခင် ဦးကိုလေး (ရေဦး) ဒု အထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း မနက်ဆိုအဖိုးကိုလာရှာတယ် အတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်နေကြလေ မရှိရင်စိုက်ခင်းထဲလိုက်တယ် ဘေးမှာစောင့်တယ် ရေချိုးရင် ရှေ့ကစောင့်တယ် ထိုင်ရင်ဘေးမှာအိပ်စောင့်တယ် အခုလဲအဖိုးကိုဘယ်မှာမှရှာမရတော့အဖိုးပုံလေးဘေးလာ စိုက်ကြည့်တယ် သူမေးချင်နေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကအဖိုးရောလို့ပြောနေသလိုပါပဲ ပီးတော့မထပဲအိပ်နေတယ် အပြင်မှာဘာကြားကြားထွက်သွားတဲ့သူကအခုဘာကြားကြားမသွားဘူး Crd aung ko ko oo —————————– ဘာေျပာရမွန္းေတာင္မသိဘူး ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဆရာဦးသက္ႏိုင္ဦး၏ ဖခင္ ဦးကိုေလး (ေရဦး) ဒု အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ၿငိမ္း) […]